Dawladda Ethiopia Oo Ganafka Ku Dhufatay Damaca Masar ee Biya Niilka
Thursday September 19, 2019 - 07:41:05 in News by
Wuxuu intaasi kudaray in itoobiya aysan jirin wax kuwasbaya damaanad qaadka qulqulka biyaha iyo in aysan masar shuqul kulahayn qaabka itoobiya biya xidheenka u adeegsabayso.
Wasiirka Biyaha Iyo Tamarta itoobiya Engineer Selashi Bekele oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in qorshaha Masar ay usoo bandhigtay itoobiya ee ku aadan dhismaha biya Xidheenka itoobiya ee Grand Ethiopian Renaissance Dam, uu yahay mid ka baxsan wadahadaladii sadex geesoodka ahaa ee Sudan, Itoobiya Iyo Masar islamarkaana uu yahay mid kahor imanaya madax banaanida iyo qaranimada itoobiya.
Wasiirka ayaa sheegay in masar ay itoobiya lawadaagtay qorshe iyada ugaar ah kaasoo ay kujiraan waxyaabo layaableh sida in itoobiya saxiixdo in socodka biyaha wabiga nile aysan hoos uga dhicin 400BMC, iyo in hadii muga biyaba ee dhanka masar uu kahoos maro 165m ay itoobiya ufurto biya xidheenkeeda GERD si,ay masar uhesho cadadka biyaha ay ubaahantahay.
Dhankakale wasiirka ayaa sheegay in wixii laxidhiidha dhanka farsamada ay siwadajira uga wada shaqayn karaan khubaro kakooban Sudan, itoobiya iyo Masar balse aysan itoobiya marna ogolaanaynin in masar iyadu korjooge kanoqoto adeegsiga khayraadka biyaha itoobiya.
Sikastaba ha ahaatee hadalka kasoo baxay xukuumada PM Abiy Ahmed ee ku aadan biyaha nile ayaa ah mid bulshada reer itoobiya ay siwayn usoo dhawaynayaan maadaama uu jiray madmadaw badan.